မိုနိုထရင်းမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ရှင်သန်ဆဲ မိုနိုထရင်းမ် မျိုးစိတ် ငါးမျိုးမှ လေးမျိုး: ဘဲတူဖျံတူကောင် (ဝဲအပေါ်), short-beaked echidna (ယာအပေါ်), western long-beaked echidna (ဝဲအောက်), eastern long-beaked echidna (ယာအောက်)
ဘဲတူဖျံတူ သည် လူသိအများဆုံး မိုနိုထရင်းမ် ဖြစ်သည်။
မိုနိုထရင်းမ် (Monotremes) သည် နို့တိုက်သတ္တဝါများထဲမှ ဒွါရတစ်ပေါက်သာပါသော မျိုးရိုးတူ တိရစ္ဆာန်များအား စုဖွဲ့ထားသော မျိုးစဉ်အဆင့်ရှိအုပ်စုဖြစ်ပြီး ၎င်းမျိုးစဉ်အား ပါဏဗေဒအလိုအရ မိုနိုထရီမေတ္တာ ဟုခေါ်လေသည်။ မိုနိုထရင်းမ်အုပ်စုသည် နို့တိုက်သတ္တဝါအုပ်စုများထဲတွင် ဥ ဥသည့် တစ်ခုတည်းသော နို့တိုက်သတ္တဝါအုပ်စုလည်း ဖြစ်လေသည်။ ထိုသို့ ဥ ဥ၍ သားပေါက်လေးများပေါက်ဖွားကြသော်လည်း အကောင်ပေါက်လေးများကို နို့ချိုတိုက်ကျွေးနိုင်သည့် နို့ ဂလင်းများလည်း ပါရှိကြ၏။
'မိုနိုထရင်းမ် (monotreme)' ဟူသော စကားလုံးသည် ၎င်းတို့၏ ဘုံဒွါရပေါက်ကို ရည်ညွှန်းသော စကားလုံးဖြစ်သည်။ ကုန်းနေရေနေ သတ္တဝါများ၊ တွားသွားသတ္တဝါများ၊ ငှက်များနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အစောပိုင်းကာလများမှ ခြေလေးချောင်း သတ္တဝါများအားလုံးတွင် ဆီး၊ မစင်စွန့်ခြင်းနှင့် မျိုးပွားခြင်းတို့အတွက် ဘုံ ဒွါရ တစ်ပေါက်သာ ပါရှိကြသည်။
၃ မိုနိုထရင်းမ် မျိုးကွဲများ
မိုနိုထရင်းမ်များသည် မာဆူးပီယယ်များနှင့် ယူသီရီးယန်းများထက် ပို၍ရှေးကျသော နို့တိုက်သတ္တဝါများမှ ဆင်းသက်လာသော်လည်း ၎င်းတို့၏ ရုပ်ကြွင်းများ တွေ့ရှိရမှုမှာ လွန်စွာနည်းပါးလေသည်။
မိုနိုထရင်းမ် မျိုးဆက်များသည် အခြားနို့တိုက်သတ္တဝါများနှင့် ဇီဝမျိုးကွဲပြားခဲ့သည့် အချိန်ကာလအတိအကျကို မသိရသော်လည်း မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာလေ့လာမှုစစ်တမ်းတစ်ခုအရ လွန်ခဲ့သော နှစ် သန်းပေါင်း ၂၂၀ ခန့်ကဖြစ်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ နယူးဆောက်ဝေးပြည်နယ်ရှိ လျှပ်စီး ချောက်ကမ်းပါးတွင် နှစ်ပေါင်း သန်း ၁၁၀ သက်တမ်းရှိသော မေးရိုးအပိုင်းအစ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများအား တွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်လေရာ အဓိပ္ပါယ်မှာ ၎င်းတို့သည် Metatheria သို့မဟုတ် Eutheria မတိုင်မီ နှစ်သန်းပေါင်း ၁၀၀ ခန့်က စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် 'သက်ရှိရုပ်ကြွင်းများ' ဖြစ်သည်မှာ အသေအချာပင်ဖြစ်သည်။
ရှင်သန်ဆဲ မျိုးစိတ် ငါးမျိုးဖြင့် ရှင်သန်ကျန်ရစ်သော မိုနိုထရင်းမ် မျိုးရင်း နှစ်ခုရှိပြီး ၎င်းတို့အားလုံးအား ဩစတြေးလျ နှင့် နယူးဂီနီ တို့၌သာ တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ဘဲတူဖျံတူ ၊ Ornithorhynchus anatinus
မျိုးရင်း Tachyglossidae : Echidnas
နှုတ်သီးတို Echidna ၊ Tachyglossus aculeatus
မျိုးစု Zaglossus - နှုတ်သီးရှည် Echidnas
အနောက်ပိုင်း နှုတ်သီးရှည် Echidna ၊ Zaglossus bruijni
ဆာဒေးဗစ်၏ နှုတ်သီးရှည် Echidna ၊ Zaglossus attenboroughi
အရှေ့ပိုင်း နှုတ်သီးရှည် Echidna ၊ Zaglossus bartoni
↑ Groves၊ C.P. (2005)။ Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M. (eds.)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (တတိယအကြိမ် ed.)။ Baltimore: ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်။ pp. 1–2။ OCLC 62265494။ ISBN 0-801-88221-4။
↑ "A New Systematic Arrangement of Vertebrated Animals" (1837). Transactions of the Linnean Society of London 18 (3). doi:10.1111/j.1095-8339.1838.tb00177.x.
↑ Thomas H. Rich; Timothy F. Flannery; Patricia Vickers-Rich (2020)။ "Evidence foraremarkably large toothed-monotreme from the Early Cretaceous of Lightning Ridge, NSW, Australia"။ in Guntupalli V.R. Prasad; Rajeev Patnaik (eds.)။ Biological consequences of plate tectonics. New perspectives on post-Gondwana break-up–A tribute to Ashok Sahni။ Vertebrate Paleobiology and Paleoanthropology။ Springer။ pp. 77–81။ doi:10.1007/978-3-030-49753-8_4။ ISBN 978-3-030-49752-1။
↑ "Multiple hypotheses about two mammalian upper dentitions from the Early Cretaceous of Australia" (2020). Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology 44 (4): 528–536. doi:10.1080/03115518.2020.1829042.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မိုနိုထရင်းမ်&oldid=730632" မှ ရယူရန်
၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၅:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၅:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။